Misy zavatra toy ny SEO ve?
Azo inoana fa niatrika ny votoatin'ny taonina momba ny fanatsarana ny fikarohana tao amin'ny Internet ianao rehetra. Raha manana traikefa kely farafahakeliny amin'ity sehatra ity ianao, dia azonao atao ny manavaka ny toro-hevitra sy toro-hevitra SEO (toy ny MOZ, Semalt na Search Engine Journal) ary tsy ilaina na indraindray aza ny fampahalalana diso momba ny fomba fitsaboana izay omen'ireo tsy matihanina. Na izany aza, raha toa ianao ka vao tonga any amin'ny sehatra ara-barotra dizitaly dia mety ho somary manakorontana anao ny lahatsoratra sasany momba ny hatsikana ary handrava ny fizarazanao Google mihitsy aza - pc sensor temperature.Amin'ity torolalana fohy ity dia hanome anao ny hevitrao aho mikasika ireo hevi-diso SEO tsy misy antony tokony hisorohana ny fampiroboroboana ny orinasanao an-tserasera.
Famaritana ny fampahalalana SEO ratsy
Raha manontany tena ianao hoe inona ny votoatin'ny SEO, manoro hevitra anao aho hamaky ity andalana ity. Ny votoatin'ny SEO ratsy dia ALL mikasika ny sasantsasany, tsy misy ilàna azy, ary ivelan'ny sisintany misy ny fitsipika momba ny fikarohana. Mora ny manavaka ny votoatin'ny SEO raha toa ka manomboka amin'ny teny hoe "Ahoana no fomba hanatsarako ny tranokalako SEO ao anatin'ny andro iray ". Matetika, lahatsoratra toy izany dia misy ampahany amina fanentanana. Ireo manam-pahaizana SEO Black-hat dia mamoaka tantara tsy mampino toy izany mba hampiroboroboana ny tolotr'izy ireo. Manoro hevitra anao aho fa tsy mamaky ireny karazana lahatsoratra ireny satria tsy mitondra fampahalalana sarobidy. Ankoatra izany, mety hampidi-doza ny fandaharana ny vohikalanao amin'ny alàlan'ny fanarahana ny SEO toro-hevitra. Andeha àry hodinihintsika hoe inona no torohevitra fanatsaràna ilaintsika mba tsy hikorontana ny lazantsika.
Ny iray amin'ireo torohevitra momba ny SEO izay be mpampiasa indrindra dia ny teny fototra. Rehefa mihamitombo isan'andro i Google, ity karazana fanatsarana ity dia mitarika ny diany. Amin'izao fotoana izao, mila mamorona ny votoatin'ny mpitsidika tranokala ianao, fa tsy amin'ny fikarohana bots. Ankoatr'izay, afaka manombana ny kalitao ao amin'ny Google ianao ary manisa ny isan'ny teny ifandaharana. Raha manana fehezan-teny maherin'ny dimy isaky ny pejy ianao, dia mety hampidi-doza an'i Google sazy. Ankoatra izany, ny votoatin-doko iray dia tsy azo vakiana ary tsy mahasoa ny mpampiasa satria izy dia noforonina fotsiny ho an'ny tolotra dokam-barotra. Raha tokony hameno ny votoatiny amin'ny teny fanalahidy ianao, dia tokony hifidy ireo fehezanteny manan-danja indrindra amin'ny fifandraisana sy ny fifamoivoizana ary ampidiro ao amin'ny lohateninao, ny famaritana azy, ny fehintsoratra fanokafana, ALTs ary imbetsaka ao anaty lahatsoratra.
Atao dika mitovy
Manoratra sasantsasany antsoina hoe SEO ireo fa tsy misy fandrahonana amin'ny votoaty dika mitovy. Saingy, fitsaratsarana diso izany. Amin'ny famoahana votoaty duplicate dia manipule fitaovam-panadiovana ianao mba hizaha azy ireo hahita zavatra araka izay irinao fa tsy amin'ny fomba tena marina. Noho izany, ny votoatin'ny tsy misy loharano dia mety miteraka lozam-pifamoivoizana ao amin'ny tranonkala. Misy ampahany vitsy monja ny azonao omena sazy Google ho an'ny votoaty dika mitovy. Na izany aza, tsy hanatsara ny tranokalanao amin'ny tranonkalanao ianao amin'ny famoronana votoaty kopian'ny tranokala satria efa manana ny votoatiny mitovy amin'ny endriny ihany i Google. Raha mila manana votoaty duplicate ao amin'ny tranokalanao ianao noho ny zavatra ilaina eo amin'ny sehatry ny fandraharahana, dia tokony "tsy misy endriny, ary tsy hanaraka" ity votoana ity mba hisorohana ny vokatra ratsy rehetra.